Home » News » Telefishanka Saint-Petersburg wuxuu Doortay Medialooks VT Server si uu U Siiyo Quudinta Master-ka Goobaha Fog
Telefishanka Saint-Petersburg wuxuu Doortay Medialooks VT Server si uu U Siiyo Quudinta Master-ka Goobaha Fog
Qiimaha wax ku oolka ah iyo ku xirnaantae xalka ayaa siiya quudinta mashiinka meelaha fog fog ee leh daahsoon
St. Petersburg - Noofembar 25, 2019 - Medialooks, bixiye caalami ah oo xallinta xalalka wareega fiidiyowga fiidiyowga ah, ayaa ku faraxsan in lagu dhawaaqo in Telefishanka Saint-Petersburg ay dooratay VT Server-ka dhulka ku gooya si ay u gaarsiyaan quudinta saygooda meelaha durugsan iyo barafka wararka. meeraysan oo ay la socdaan isgaarsiinta iyo calaamadaha kaabayaasha. La-shaqeeye hore ee adeegga socodka-hooseeya ee cusub, shabakadda sharafta leh ee Saint-Petersburg ayaa leh wax soo saar badan oo gudaha ah iyo dhacdooyin nool waxayna daboolayaan gobollada St. Petersburg iyo Leningrad. Idaacadda 10-sano jirka ah wuxuu sidoo kale siiyaa quudinno xirmada kanaalka ah ee loogu talagalay Tricolor iyo NTV Plus satellite adeegyada warbaahinta.
Markii la soo saarayo sheeko toos ah, waxaa muhiim ah in hibada duurka ku dhex jirta ay arki karto istuudiyaha 'studio feed' iyada oo aan la daahin soo wareejinta si qunyar ah iyo waayo-aragnimo aan kala joogsi lahayn oo daawadayaasha; taasi waa halka ay Medialooks la daahitaankiisu hooseyso ay tahay mid aad u muhiim ah, ” sharxay Andrey Sablin, injineer qalabka TV-ga Saint-Petersburg. "Medialooks VT Server waxay sidoo kale u ogolaaneysaa barayaasha inay u isticmaalaan taleefannadooda casriga ah si ay u helaan quudinta barnaamijka iyagoo si fudud ugu furaya URL bog furayaasha boggooda internetka oo ah shaqo aad u faa'iido badan."
“Warbaahinta Muuqaalku waxay ku faraxsan tahay in Saint-Petersburg ay tahay mid ka mid ah macaamiisheennii ugu horreeyay ee soo saarkan cusub ee xiisaha leh,” ayuu yidhi Andrey Okunev, oo ah Maamulaha Guud ee Warbaahinta. "Rakibaadda waxay ahayd mid dhakhso ah oo aan dhibaato lahayn oo go'aankeenna ah inaan si buuxda u taageerno baahiyaha hawlgallada aan kala go 'lahayn ee 24 / 7 iyo in la keeno wax qabad aan kala go' lahayn iyada oo la ilaalinayo isku-halaynta joogtada ah ayaa horseeday in warbaahin-goboleedkan muhiimka ah in ay ku kalsoonaadaan gudbinta aaladahayaga software."
VT Server waa adeeg-saaxiibtinimo, cod-ku saleysan daruuriga ah kaas oo muujinaya waqtiga ugu dhakhsaha badan ee warshadaha iyada oo la rakibay lagu gaadhay labada qaabilaad iyo dhinacyada gudbinta saddexda riix oo keliya. Waxay isku xiraa goobo badan oo aan kala go 'lahayn, waxay si dhakhso leh u cabbirtaa si sahlan, waxay ku socotaa qalabka-shelf-ka-shelf, waxayna taageertaa gaadiidka fiidiyoowga ah ee tayo sare leh ee 4K khadka Internetka Dadweynaha illaa meerayaasha badan iyada oo loo marayo hal interface oo leh cajalad aad u yaab badan oo ah 100 ms. Xal u helida barnaamijkan kaliya ee software-ka ah wuxuu ku shaqeynayaa labada nooc ee CPU iyo GPU-yada, isagoo adeegsanaya qalabka guud ee loo yaqaan 'shelf-shelf' shelf-shelf si ay u bixiyaan dabacsanaan iyo ugu badnaan iyadoo la baabi'inayo baahida loo qabo qalab gaar ah. Taageerida dhacdooyinka tooska ah iyo dibadaba, xalkaan 'Medialooks' wuxuu u oggolaanayaa kaamirooyinka PTZ in meel fog laga xakameeyo, lagu qiyaasi karo illaa daraasiin goobood, waana la kormeeraa oo lagu maareeyaa iyada oo la adeegsanayo adeegsiga ku saleysan-daruuriga ah ee daruuriga ku saleysan. VT Server ayaa sidoo kale isku daraysa kooxaha wax soo saarka fiidiyowga saddexaad ee saddexaad iyagoo u oggolaanaya ku-biirinta durdurrada martida ee biraawsarkooda keliya.
VT Server, oo si gaar ah loogu talagalay soosaarka tooska ah, waxay taageertaa xarumaha TV-yada, shirkadaha wax soo saarka fiidiyowga ah, goobaha munaasabadaha, garoonada, guryaha lagu cibaadeysto, istuudiyaha ciyaaraha e-isboortiga ama hay'ad kasta oo leh baahi ay ku xiriirin karto adeegyada fiidiyowga ee goobo badan oo fog fog si joogto ah. Iyada oo ku saleysan teknoolojiyada SRT iyo WebRTC, VT Server waxay muujisaa is-dhexgalka durdurrada durdurrada inta lagu jiro soo-saarka kamarado badan waxayna gudbisaa gudbinta tayada tayada baahinta leh ilaa 4K 60p fiidiyowyo leh multichannel 512 kbps audio. Ku habboon labada qulqulka shaqada ee loo yaqaan 'NDI® iyo SDI' (Blackmagic Design iyo AJA oo la taageeray), waxay sidoo kale taageertaa kanaalka alpha ee labada qaab, iyo sidoo kale buuxinta iyo soosaarka furaha. VT Server waxaa lagu hagaajin karaa inuu ka shaqeeyo daruuriyaha 'Medialooks' ama macmiilka doorta macmiilka gaarka ah ama kaabayaasha daruuriga dadweynaha.
Tan ugu muhiimsan, VT Server waligiis ma jabi doonaan miisaaniyadda –waxaa loo soo bandhigaa sidii macmiil ay la socoto qorshe qiimayaal la saadaalin karo kaasoo u oggolaanaya hawl wadeennada inay maareeyaan OPEX ayna kusii nagaadaan miisaaniyadda.
Ku daray Okunev, “Waxaan ku faraxsanahay in hal-abuurnimadan cusub ay hawlgallada Saint-Petersburg TV ka dhigtay mid hufan oo la isku halleyn karo, waxaana rajeyneynaa in aan u soo qaadanno wax ku soo kordhiso maaddaama badeecadda si dabiici ah ay u fideyso in ay si wanaagsan u dhex-gasho teknoolojiyadda SRT iyo WebRTC oo aan ku darno awoodo cusub, sida qaadista fiidiyowga aan dhameystirnayn. ”
Broadcast Engineer Broadcast Engineering Kaalinta Graham Chapman Prmoted toEditor Dukaamada Saxaafada VT Server Telefishanka Saint-Petersburg SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Fiilooyinka TV Technology Ultra HD Forum Video Engineer xalalka safarka fiidiyoowga	2019-11-25
Previous: Istaadiyeyaasha CRM Weli Waxay Ku Sii Wanaagsan Yihiin Facilis